Miverina amin'ny faha-15 taonany ny Festival Pride Pride
Home » Lahatsoratra farany farany » LGBTQ » Miverina amin'ny faha-15 taonany ny Festival Pride Pride
Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Hospitality Industry • LGBTQ • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Tahaka ny afisikan'ny artista manaitra azy ary mirehareha amin'izany, Belgian Pride Brussels dia milaza ny maha-izy azy tamina programa iray noforonin'ireo olompirenena. Tian'izy ireo ny zavakanto avant-garde, fifanakalozana kolontsaina, eritreritra iraisana, fihaonana mandalo, hatsaran-tarehy feno… Manohy ny tantarany sy ny iraka tany am-boalohany ny Belzika Pride, izany hoe:
• Manasongadina talenta laika avy any Bruxelles sy any ivelany;
• Mamorona rohy misy eo amin'ny tontolo samihafa;
• Manolotra toerana azo antoka ahafahan'ny olona mieritreritra sy manangana fiaraha-monina marina.
Ho fantatrao fa ny fetibe 2019 dia miady mafy amin'ny politika tononkalo amin'ny fanolorana hetsika isan-karazany amin'ny faritra samihafa: mozika, seho, fihaonambe, sinema, fampisehoana dragona, zavatra hita, fankalazana, vogues ary famoronana.
Belgian Pride dia hetsika tsy azo ihodivirana ho an'ny vondrom-piarahamonina LGBTQI + any Bruxelles, satria io no fotoana ahafahana manazava ny asan'ny fikambanana isan'andro sy ny fitakian'izy ireo ara-politika. Amin'ity taona ity isika dia manana bebe kokoa ny antony hanamafisana ny toetran'ny mpitolona sy mitaky ny hetsika.
Raha ny marina dia manana ny teny filamatra #AllForOne, nofidian'ireo fikambanana isam-paritra telo - RainbowHouse Brussels, Arc-en-Ciel Wallonia ary çavaria ny Belzika Pride. Manome fahitana ny olona LGBTQI + izay mahatsapa fanavakavahana eo amin'ny sisin-tany (fanavakavaham-bolon-koditra, fanavakavahana, fanavakavahana, sns.). Io ihany koa ny fotoana hanomezam-boninahitra sy fankalazana ny faha-dimampolo taonan'ny Stonewall Riots any New York, izay nahatonga ny hetsika LGBTQI + iraisam-pirenena ankehitriny.
Eo am-piandrasana ny fifidianana isam-paritra sy federaly 2019, RainbowHouse dia namorona lisitr'ireo fitakiana izay mikendry ny hahatonga an'i Belzika ho tompondakan'ny fitoviana! Izany dia satria, na eo aza ny tombom-barotra azo tamin'ny taona vitsy lasa izay, dia mbola betsaka ny fanamby tsy maintsy resena momba ny fitoviana sy ny fahazoana miditra amin'ny zo. Mangataka amin'ny mpanao politika izahay mba hitadidy ao an-tsaina hoe inona ny zava-misy ho an'ny olona LGBTQI +, ohatra, rehefa miatrika fanavakavahana hafa (fanavakavahana, fanavakavaham-bolon-koditra, sns.).
Ny programa Belzika Pride Pride dia somary hafahafa, mitaky be loatra ary tafiditra ao anatiny. Jereo izany amin'ny ankapobeny ary tsy mangataka andro intsony.